Isixazululo se-ArchLinux: Idivayisi yezimpande ayilungiselelwe ukuthi ifakwe | Kusuka kuLinux
Isixazululo ku-ArchLinux: Idivayisi yezimpande ayilungiselelwe ukuthi ifakwe
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ngemuva kokubuyekeza ku- I-Kernel 3.10, lapho ngiqala umkhiqizo wami omusha sha I-ArchLinux emva kwe I-GRUB, Ngithole isexwayiso esithi:
Idivayisi yempande ayilungiselelwe ukuthi ifakelwe ukubhala okufundwayo! Kungaphinde kubhekwe emuva kwesikhathi
Kepha njengoba konke kwaqala ngokujwayelekile, angikunakanga. Kepha namhlanje nginqume ukuthi angisafuni ukubona leso sixwayiso futhi ngaqala ukufuna izimbangela ezingaba khona.
Ukubheka ifayela lami / njll / fstab Ngiyaqaphela ukuthi ama-discs afakwe ngenketho rw (funda-bhala), ngakho-ke isexwayiso esingenhla besingasho lutho.
Ngaphandle kwe-inthanethi endlini angikwazanga ukusesha -Google noma ku- I noma i I-Arch Wiki, ngakho-ke ngaqhubeka "ngithinta" amafayela, ngibheka ukuthi inkinga ingaba kuphi.
Ngakho-ke ngacabanga: Ngubani lo othi ukusatshalaliswa kwami ​​ngiphakamise i-kernel engxenyeni ethile? Futhi kuvela ukuthi owokuqala ovela uma uvula ikhompyutha akekho omunye ngaphandle kokuthi I-GRUB.
Ingena kufayela /etc/grub/grub.cfg Ngiqaphele inkinga kulayini:
Okuthi uma uyibuka kunenketho ro (Funda kuphela) futhi kufanele kube njalo rw (kufundwa ukubhala).
Ukuxazulula lokhu angizange ngithinte ifayili ngesandla, kepha okokuqala ngisebenzise umyalo:
Lapho-ke ufinyelela ukucushwa kwe-GRUB futhi, ulayini uvele kahle:
Ngiqale kabusha ikhompyutha ne-voila, isexwayiso sanyamalala 🙂
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Isixazululo ku-ArchLinux: Idivayisi yezimpande ayilungiselelwe ukuthi ifakwe
Kungokokuqala ngiphawula, yize ngikulandela njalo.
Bengilokhu ngisebenzisa i-Arch isikhashana futhi selokhu ngabuyekeza i-kernel 3.10 ngithola lelo phutha, yize njengoba usho, konke kubonakala kuqhubeka kusebenza kahle. Ngiqhubekile njengoba kukhonjisiwe kokuthunyelwe futhi u- "rw" usevele uvele ku-grub.cfg, kepha lapho ngiqala kabusha ngisathola iphutha.
Ngithatha leli thuba ukukuhalalisela kubhulogi.
Ngabe uqaphele ukuthi ifayili le /etc/grub/grub.cfg nalo liguqule u-ro laya ku-rw? Ngiqale ukubheka esithangamini se-Arch futhi mhlawumbe icala lakho alifani nelami futhi kufanele wenze lokho abakukhombisayo lokhu okuthunyelwe, yize ngiphakamisa ukuthi ufunde yonke intambo. Kuleyo ntambo omunye wabasebenzisi uxazulula inkinga yakhe njengami.
Ngifake kolunye ukwahlukanisa Ubuntu futhi kukhona i- "master" grub, ngivuselele okwakamuva nephutha alisaveli.
njengoba besho esithangamini se-Arch-Spanish faka kabusha i-grub2 bese usebenza
Akudingeki ngiphinde ngifake i-Grub2. Vele usebenzise umyalo owukhulumile.
Kungenzeka kungabi yindawo efanele, kepha ukusebenzisa ngokunenzuzo iqiniso lokuthi lokhu okuthunyelwe kumayelana ne-Arch, ngabe kukhona owaziyo ukuthi kungani i-libreoffice 4.1 ingakabi se-Arch repo?
Hmm, awazi, kuzodingeka useshe futhi ufunde ngakho.
Imvamisa, ku-Arch Linux sinezinguqulo zakamuva zesoftware ngemuva nje kokukhishwa, kepha iLibreOffice iyinto ehlukile, kuthatha isikhathi eside ukufinyelela ukuphumula okuzinzile. Ngesikhathi sokugcina ngihlole ukuthi kuthathe cishe inyanga, uma ngingaphosisi.
Ongakwenza ngenkathi uyihlanganisa noma ukufake kusuka ku-Testing.
Ngiyabonga elav, ngichithe amasonto ngifuna lesi sixazululo futhi bekuyinto elula kangako, isexwayiso sesibe yi-xD ejwayelekile.
Hahaha kwenzeka into efanayo kimi ngaze ngakhathala ukuyibona .. esihogweni ngeXwayiso
Hahahaha, enye efana nayo, okokuqala lapho umyalezo uphuma ngenza lokho ekushoyo, ngifaka ukwahlukanisa izimpande, futhi njengoba bekungasizi ngalutho ngavele ngakuziba, ekugcineni akubukanga kuthinta nakancane. 😀
Kubukeka sengathi bonke abasebenzisi be-Arch bayavilapha. 😀
Ngithola lowo mlayezo omncane bese ngidlula fsck xd ... kepha iphuzu ukuthi anginayo / etc / grub, ngizozama ukuguqula / boot / grub / grub.cfg.
Isixazululo salabo abanjengami abasebenzisa iSyslinux esikhundleni seGrub2.
Isandla se-sudo /boot/syslinux/syslinux.cfg
Kumugqa we-kernel, shintsha i-ro iye ku-rw.
Gcina bese uqala kabusha.
Ngenkathi ngisebenzisa i-archlinux, kwavela kimi futhi, kepha ngoba angibonanga lutho olungajwayelekile, angikaze ngicabange ukukulungisa.
Ngiyabonga, iqiniso ukuthi ngangicindezelekile ukubona leso sixwayiso, noma singazange sithonye lutho kuhlelo.
Ngenze okufana nalokho abakuphakamisile nge-GRUB2 ngentambo, kepha ku-BURG. Kulabo abasebenzisa i-BURG njengami, hlela ifayela:
Thola umugqa 92, futhi lapho uthi "ro" shintshela ku- "rw". Bese ugijima njengezimpande:
Futhi ngalokho kufanele ulungele.
Kubukeka sengathi inkinga isivele ilungisiwe njengokujwayelekile. Ngenze ukufaka okuhlanzekile futhi manje lowo mlayezo awusaveli.
Enye into, ifayili kufanele /boot/grub/grub.cfg akufanele ihlelwe, mhlawumbe kufanele usebenze nayo / njll / okuzenzakalelayo / grub. Lapho kufanele ungeze rw:
GRUB_DISTRIBUTOR = »I-Arch»
Iphuzu ukuthi kungenzeka kuwe njengawe, ngikwenze njengoba usho futhi lapho ngakha ukucushwa ngifaka "rw ro quiet splash". Ngisho, akazange alungise lutho.
Kungakuhle ukulungisa ulayini 138 we /etc/grub.d/10_linux noma 92 we /etc/burg.d/10_linux_proxy. Ngaleyo ndlela lapho ubuyekeza ukumiswa kuzolungiswa ngokuphelele.
Ngingasho okuthile okufana ne- "ro rw nosequemás" kodwa noma kunjalo inkinga isexwayiso siyeke ukuphuma.
Izinto "eziyinqaba" zivame ukwenzeka e-Arch. Isibonelo, ngaphambi kokufaka kabusha i-Arch, ne-LTS ALSA kernel ibone konke, ngemuva kokufaka kabusha bekufanele ngifake iPulseAudio ukuyenza isebenze nama-headphone ami; hhayi wonke umuntu.
Awuzange ungisebenzele, lowo mlayezo uqhubeka uvela uma uqalisa ukubhula.
Ngigijimise umyalo: Sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg, akunankinga, kepha lapho ngiqala ngithola umyalezo.
Ngiyabonga, ngizozama. Bengilibonile iphutha, kepha lapho ngibona ukuthi konke kusebenza kahle angizange ngiqale ukufuna isixazululo.
Ngenkathi ifakwa (kwenzeka kimi njengakwezinye izikhathi) ngathola umyalezo wokuthi ifakiwe njenge- grub.cfg.pacnew nalapho ngiqala kabusha ubuhlungu esweni umyalezo wephutha…. Ngakho-ke ngaphambi kokwenza ushintsho olufanele lwamafayela ngiqale ukuqhathanisa amafayela amabili (i-grub.cfg ne-grub.cfg.pacnew) futhi kuvela ukuthi bekunomehluko othile:
okokuqala lowo okhulume ngaye del ro y rw
bese i-UUID ye / dev / sda2 ongayibheka ku-fstab, yashintshwa ku-grub.cfg.pacnew,
kanye naku-grub.cfg kubonakala kubheka okungu-2 ekugcineni
uma [x $ feature_platform_search_hint = xy]; lapho-ke
sesha i -no-floppy -fs-uuid -set = impande- ukusikisela-i-bios = i-hd0, msdos2
naku-grub.cfg.pacnew ishintshelwe ku-5
sesha i -no-floppy -fs-uuid -set = impande- ukusikisela-i-bios = i-hd0, msdos5
Bengike ngathola lesi sixazululo phambilini futhi besisebenza kwikhompyutha yami yedeskithophu (bios) kepha hhayi kwi-laptop yami (uefi). Kwi-laptop yami ukuqala i-efistub iyodwa, noma i-grub, noma i-syslinux, noma i-gumiboot. Impela uma ngifaka i-grub izoxazulula inkinga, kepha ngithanda ukuthola isixazululo ngaphambi kokuya ku-tangent.
Ngiyabonga ngokuthunyelwe, ezinsukwini ezimbalwa ezedlule bengibheka leso sexwayiso kodwa ngoba konke bekusahamba kahle, futhi bengingafuni ukukulungisa, ungabheki lutho anything kodwa namhlanje ngikhathele ukukubona.
Sanibonani, ngiyabonga ngokuthunyelwe.
Ngiyabonga kakhulu, bengibuyekeze izilungiselelo eziningi futhi angitholanga ukuthi inkinga ibiyini. Kwakuqala ukungisabisa. : p
Kepha ngisebenzisa i-syslinux, futhi ngaya kufolda / boot / syslinux futhi ngahlela ifayela le-syslinux.cfg ngashintsha konke okushiwo ro to rw.
Ngiyabonga, uma kusebenza!
Ozithobayo !!!! 🙂
Ngisanda kuvuselela yonke into, benginovalo lapho ngibona lowo myalezo, bengicabanga ukuthi ukufakwa kwami ​​kuzolahleka, ngiyabonga ngolwazi, konke kuhamba kahle manje.
Ngiyabonga elav, kusebenze kahle
UMartin Coll kusho
Ayigcinanga ngokulungisa isiphazamisi esishiwo kuphela, kepha ibuye ibe nesiphazamiso ebikade inaso ngaphambili. Kwakukhona umugqa owawuphelelwe yisikhathi kusuka ekuvuseleleni kwangaphambilini, futhi ngangikuguqula ngesandla ngaso sonke isikhathi lapho ngibhonsa!
Ngibona kakhulu! 🙂
Phendula uMartín Coll
Ngiyabonga kusebenze ngokuphelele. Manje qhubeka uphonsa umlayezo, kepha ngicabanga ukuthi kujwayelekile
URodolfo Martinez kusho
Umnikelo wakho ungisize kakhulu, ngiyabonga!
Nginombuzo owodwa nje, kulayini owubhalile:
Ukuhlola ifayili /etc/grub/grub.cfg ngibonile inkinga kulayini:
Ngeke kube ku / boot / grub / ikheli esikhundleni se / etc ??.
Phendula uRodolfo Martínez
Ngabe lokhu kuyasebenza kuKademar osuselwe ku-Arch?
Izengezo ezincane kumatimu we-FromLinux
Ungayifaka kanjani i-Copy njengolunye uhlelo lokusebenza ku-Linux